यस अनुप्रयोगको साथ तपाईं क्रोमबुकमा विन्डोज अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्नुहुन्छ ग्याजेट समाचार
Chromebook हरु तिनीहरू अमेरिका मा धेरै लोकप्रिय छन्विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रमा। ती टोलीहरू हुन् जुन प्रयोग गर्न सजिलो छ, यातायात, र तिनीहरूको मूल्य - मोडेलमा निर्भर गर्दछ - धेरै मध्यम छ। सबै मिलेर उनीहरूलाई कक्षा कोठामा धेरै आकर्षक बनाउँदछन्। अब, ती बाहिर वस्तुहरू परिवर्तन हुन्छन्; प्रयोगकर्ताहरूको बिभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्। र इन्टरनेटमा आधारित अनुप्रयोगहरू उच्च मागको लागि पर्याप्त छैन।
महिनौ अघि Android अनुप्रयोग प्रयोग गर्ने सम्भावनाको साथ चीजहरू अझ राम्रो हुँदै गयो; त्यो क्रोमबुकमा गुगल प्ले अनुप्रयोग स्टोर स्थापना गर्न सक्षम हुनु र यसैले थोरै प्रयोग गर्नुहोस्। कम्तिमा पनि, कुनै पनि समयमा इन्टरनेट जडान प्रयोग बिना नै। तर हामी आफैंलाई बच्चा नदिनुहोस्: विश्वव्यापी रूपमा मूल प्लेटफर्म विन्डोज हो। र यो मन पराउनुहोस् वा नगर्नुहोस्, धेरै उपयोगकर्ताहरू जसले टाढा टाढा काम गर्दछन् विन्डोज अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ। ती सबैको लागि यो Google Play मा क्रिप्ट गरिएको छ एक अनुप्रयोग जसले तपाइँलाई Chromebook मा विन्डोज प्रोग्रामहरू चलाउन अनुमति दिनेछ.
यस अनुप्रयोगको नाम हो CrossOver। यसले तपाईंलाई अनुमति दिनेछ ChromeOS मा विन्डोज प्रोग्रामहरू चलाउनुहोस्। तपाईं दिमागमा, तपाईंको क्रोमबुक एक इंटेल प्रोसेसरमा आधारित हुनुपर्दछ। साथै, यो परियोजना, जुन हाल बेटामा छ, पूर्ण रूपमा डिबग गरिएको छैन, त्यसैले तपाईंले भविष्यमा नयाँ अपडेटहरूको लागि पर्खनु पर्दछ। तर विकासकर्ताहरूले पहिल्यै चेतावनी दिइसकेका छन् कि ती आइपुग्नेछन्।
अब, अन्य अनुप्रयोगहरूमा पहिले नै उपलब्ध यो अनुप्रयोग, भुक्तान गरिएको छ। जहाँसम्म, नयाँ अपडेटहरू प्रस्ताव गर्न सक्षम हुनुको विचारको साथ, तिनीहरूले नि: शुल्क सार्वजनिक रूपमा बेटा खोल्ने र सम्भावित बगहरू भोग्ने र यी विफलताहरू के भएको रिपोर्ट गर्ने निर्णय गरेका छन्। अन्तमा, तपाईंलाई भन्नुहोस् कि यो अनुप्रयोगको लागि तपाईंको क्रोमबुकमा काम गर्नका लागि, ChromeOS ल्यापटप Google Play को साथ उपयुक्त हुनुपर्छ, र यसैले, एन्ड्रोइड संग। यद्यपि तपाइँको मोडल यस बर्ष जारी गरिएको थियो भने, त्यसो भए शान्त.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » ल्यापटपहरू » यस अनुप्रयोगको साथ तपाईं क्रोमबुकमा विन्डोज अनुप्रयोगहरू चलाउन सक्नुहुनेछ